Khasaaro ka dhashay dagaal dhex-maray milatariga iyo sirdoonka Sudan
By WARIYAHA KHARTUUM , GAROWE ONLINE
Rabshadaha ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaa meelo ay kamid tahay caasimada Khartuum.
KHARTUUM, Suudaan - Shan qof, oo ay ku jiraan laba askari, ayaa la dilay kadib markii ciidamada Sudan ay maanta weerareen wakiilo ka tirsan sirdoonka laga baqo ee dalkaas oo gadooday
Talaadadii, rasaas culus ayaa laga maqlay qaar ka mid ah saldhigyada hay’adda sirdoonka NISS ee Khartoum, kadib markii wakiilada hay’addaas ay diideen qorshe howlgab oo ay soo jeediyeen mas’uuliyiinta cusub ee dalkaas.
Xubnaha NISS ayaa hormuud u ahaa weerarkii lagu qaaday dibad-baxayaasha intii uu socday kacdoonkii lagu riday madaxweyne Omar al-Bashir, bishii April 20119.
Goor dambe oo Talaadadii ahayd ciidamada militariga iyo kuwa sida militariga u tababaran ee RSF ayaa ku xoomay xarumaha sirdoonka kadib markii rasaasta laga maqlay.
“Waxaan go’aansanay inaan weerarno xarumaha si loo soo geba-gebeeyo kacdoonkan…waxaana hadda la wareegnay saldhigyada,” waxaa sidaas weriyayaasha u sheegay madaxa shaqaalaha madaxtooyada Sudan General Osman Mohamed al-Hassan.
“Waxaa naga dhintay laba askari, waxaana naga dhaawacmay afar kale oo ay ku jiraan laba sarkaal.” Ayuu yiri.
Dhinaca kale, dhaqaatiir ayaa sheegay in saddex qof oo shacab ah – oo dhammaantood isku qoys ahaa – ay sidoo kale ku dhinteen rasaas la isku weydaarsaday meel ku dhow saldhigga NISS ee Koonfurta Khartoum. Wiil dhallinyaro ah ayaa sidoo kale la dhaawacay.
Afhayeenka dowladda Faisal Mohamed Saleh ayaa sheegay in wakiilada NISS ay gadoodeen kadib markii ay diideen lacagta loogu qondeeyey inay howlgab uga noqdaan shaqada.
GO + Wakaaladaha
Taliyihii sirdoonka Sudan oo is-casilay xili ay qalasaaso ka jirto dalkaasi
Afrika 13.04.2019. 15:14
Saalax Cabdullaahi Gosh ayaa bishii Febraayo 2019 booqasho ku yimid magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya.
Dibadbaxayaasha Suudaan oo xiriirka u jaray guddiga milatariga
Caalamka 22.04.2019. 06:53
Milatariga iyo kooxaha rayidka ee Suudaan oo "heshiiyay"
Caalamka 21.04.2019. 14:52
Mucaaradka Suudaan: Afgambi kuma badalaneyno in-qilaab horey
Afrika 11.04.2019. 16:23
Somaliya iyo Suudaan oo saxiixday heshiis Iskaashi
War Saxaafaded 06.10.2017. 14:49
Walaalaha madaxwaynihii la afgambiyay ee Sudan oo la xiray
Afrika 18.04.2019. 20:43
Al-Bashir oo is-casilay iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda Sudan oo kacsan
Afrika 11.04.2019. 12:44